Madaxweynaha Soomaaliya Oo Soo Dhaweeyey Taagerada Dalka Japan Ee Tooska Ah • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Madaxweynaha Soomaaliya Oo Soo Dhaweeyey Taagerada Dalka Japan Ee Tooska Ah
Warsaxaafadeed ka soo abxay xafiiska Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xassan Shiikh MAxamuud ayaa lagu sheegay in Madaxweynaha Soomaaliya soo dhaweynayo taageerada tooska ah ee dalka Japan siinayo Dawladda Soomaaliya.
Mudaddii kala guurka ama isbedelka xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dalka Japan go’aansadey in ay so toos ah ula hadlaan dawladda Soomaaliya isla markaana aysan wixii taageero ah u soo marsiineneyn hay’ado kale ee ay toos ula xiriirayaan dawladda Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya Xassan Shiikh Maxamuud ayaa si weyn ugu amaaney dalka Japan talaabadaas geesinimada leh ee uu qaadey, isla markaana looga baahan yahay bulshada caalamku in ay sidaas oo kale yeelaan.
Warsaxaafdeedka ayaa loogu baaqey dalalka kalena in ay sidaas oo kale yeelaan isla markaana ay ku daydaan dalka Japan go’aanka ay gaareen ee tooska ula hadlaya Xukuumadda Soomaaliyeed.
Taageeradii la siin jirey dawladaha Soomaaliya ayaa loo soo marsiin jirey hayä’adaha caalamiga ah gaar ahaan kuwa Qaramada Midoobey kuwaas oo xarumahoodu ku yaalaan dalka Kenya, waxaana la aaminsan yahay waxa Soomaaliya soo gaara in ay ahayd mid aad u yar.
Akhriso Warsaxaafadeedka (English)